C/raxmaan Faroole oo si layaab leh uga hadlay warar maalmihii ugu dambeysay la isla dhex-maraayay (VIDEO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan Faroole oo si layaab leh uga hadlay warar maalmihii ugu dambeysay la isla dhex-maraayay (VIDEO)
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland islamarkaana ah Senator ka tirsan Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud (C/raxmaan Faroole) ayaa si kulul u beeniyay warar maalmihii ugu dambeysay laga baahiyay ee ku aadanaa inuu ka tanasulayo mushaxnimadiisa madaxweynaha Soomaaliya.
C/raxmaan Faroole ayaa tilmaamay in kulankii dhawaan ka dhacay hoyga uu ka dagan yahay magaalada Garoowe uu ahaa kulan afar geesood ah oo looga hadlaayay arrimo u gaar ah maamulka Puntland.
“Waan maqlay wararka ay dadka qaar soo qorteen, ee ahaa inaan ka tanaasulayo doorashada musharaxnimadeeda madaxweynaha Soomaaliya, arrintaasi waxba kama jiraan, wuxuuna kulankeenu ku saabsanaa oo kaliya arrimo u gaar ah maamulka Puntland” Sidaasi waxaa yiri C/raxmaan Faroole.
Warbaahinta Soomaalida qaarkood ayaa shaaciyay in kulanka dhawaan ka dhacay magaalada Garoowe looga hadlay inuu C/raxmaan Faroole ka tanaasuli doono musharaxnimadiisa xilka madaxweynaha Soomaaliya, taas oo uu ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin.
Si kastaba, waxaa mudooyinkii ugu dambeysay la dareemayay kala fogaansho siyaasadeed oo ka dhex jirtay siyaasiyiinta kala ah madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Faroole iyo ra’iisul wasaaraha xukuumada federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, kuwaas oo haatan u sharaxan doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.